एजेन्सी । दुइचार अक्षरले बनेको राशिमा मानिसको कयौँ राज लुकेको हुन्छ । तपाईंको राशिले तपाईको व्यक्तित्व मात्र होइन भविष्य र अघिल्लो जन्मको पनि धेरै कुरा खोल्ने ज्याेतिष विज्ञानमा उल्लेख गरिएको छ ।
मानिस जति भविष्यको बारेमा जान्न उत्सुक हुन्छन् त्यति नै अघिल्लो जन्मको बारेमा पनि निकै उत्साहित रहन्छन् । अघिल्लो जन्ममा तपाई के हुनुहुन्थ्यो ? मानिस वा जनावर ? म के थिए ? को थिएँ ? आदि इत्यादि ।
त्यसो हो भने आउनुहोस्, राशिअनुसार तपाईं अघिल्लो जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो ? जान्नुहोस् ।
मेष राशि : मेष राशिको मानिसहरु अघिल्लो जन्ममा राम्रो नेता थिए । तपाईको राशि अनुसार भन्न सकिन्छ कि तपाई निकै बलियो लिडर हुनुहुन्थ्यो । तपाईंले कुनै आर्मीको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । जहाँ तपाईले विजय हासिल पनि गर्नुभएको थियो ।
वृष राशि : वृष राशि अनुसार तपाई निकै राम्रो टीम प्लेयर हुनुहुन्थ्यो । तपाईले पूर्वजन्ममा केहि विश्व रेर्कड समेत कायम गर्नुभएको थियो ।
मिथुन राशि : तपाईंको राशि अनुसार तपाईको बारेमा निकै रोचक तथ्य बताइएको छ । तपाईको पूर्वजन्ममा जुम्ल्याहा थियो । तपाईं कुनै पनि चीजलाई प्राथमिकता दिनु, सही समयमा काम गर्ने जस्ता राम्रो बानीको हुुनुहुन्थ्यो ।
कर्कट राशि : कर्कट राशिवाला मानिसहरुले अर्काको ख्याल गर्ने , स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जस्ता काम गर्ने गर्थे ।
सिंह राशि : जुन मानिसको सिंह राशि हुन्छ ती मानिसहरु सच्चा लिडर हुन्थे । उनीहरू एक यस्तो लिडर जसलाई धेरैले ‘फलो’ गर्न चाहन्छन् । सायद यी राशिका मानिसहरू देशको लिडर थिए ।
तुला राशि : तपाईंको राशिले भन्छ कि तपाईको शब्दसँग निकै खेल्न रमाउनुहुन्थ्यो । साथै तपाई मध्यस्थकर्ताको काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले यो भनिन्छ कि तपाई निकै ठूलो कवि हुनुहुन्थ्यो ।
वृश्चिक राशि : यी मानिसहरू धेरै नै संयम र दृढ हुनुहुन्थ्यो । साथै तपाईले जीवनमा निकै बाधाहरुको पार गर्नुभएको थियो ।
धनु राशि : धनु राशिका मानिसहरु फेशन गर्न निकै रुचाउँथे । यस राशिका मानिसहरू राम्रा राम्रा पहिरनहरूमा सजिएर हिँड्न मन पराउँथे ।
मकर राशि : तपाईं बाहिरी दुनियाँको बारेमा निकै दिलचस्प हुने र अधिक प्रेम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । प्रकृतिप्रेमी हुनुहुन्थ्यो ।